CRYPTOCURRENCIES - Hindisaha iyo talosiinta maalgashiga
Cryptocurrency waa lacag dijitaal ah oo ujeedadeedu tahay in lagu sameeyo macaamil ganacsi, iyada oo laga xoreynayo dhinacyada saddexaad ee hadda lagu kalsoon yahay sida bangiyada tusaale ahaan. Cryptocurrencies Kuwaas ka dib waa la iibsan karaa, lagu iibin karaa ama lagu beddeli karaa meherado khaas ah sida Binance ama Coinbase.
Iibso Cryptocurrencies on Coinbase Iibso Cryptocurrencies on Binance
In kabadan 5000 cryptocurrencies si loo ogaado
Hogaamiyaha aduunka ee hogaaminaya, Seeraar (BTC) waxaa lagu keydiyaa oo looga ganacsadaa si ammaan ah internetka iyadoo la adeegsanayo buuga dijitaalka ah ee loo yaqaan 'blockchain'. Bishii Oktoobar 31, 2008, Satoshi Nakamoto (magac been ah) wuxuu sharxayaa sida lacagta dijital ahi u shaqeyso. Dhowr bilood ka dib, xannibaadda ugu horreysa ayaa laga sameeyay diiwaanka dijital ah oo macaamil ganacsi ugu horreeya ayaa la sameeyaa. Seeraar ayaa markaa ku kacaysa $ 0,0007.
Ereyga Ethereum (ETH) waa cryptocurrency loo yaqaan 'cryptocurrency' oo ay weheliso barxad xisaabeed baahsan. Horumariyayaashu waxay u adeegsan karaan barxadda si ay u dhisaan codsiyada baahinta oo ay u soo saaraan hanti cusub oo loo yaqaan 'crypto-properties' oo u qalma sida astaamaha Ethereum.
Nidaamka deegaanka Binance
Baro qaar ka mid ah cryptocurrencies ee nidaamka deegaanka Binance iyo isaga Binance SmartChain. Marka laga soo tago maareynta is-weydaarsiga hoggaamineed ee adduunka, Binance wuxuu galiyaa nidaamka deegaanka oo dhan. BNB waa hantida asalka u ah Binance Silsilad. BNB waxay leedahay qaabab badan oo faa iidooyin leh waxayna shidaal siisaa nidaamka deegaanka Binance sida shidaalka salka ku haya. BNB waxay quudisaa nidaamka deegaanka Binance. Sida lacagta wadaniga ah ee Binance Chain, BNB waxay leedahay adeegsiyo badan: hurinta macaamillada silsiladaha, bixinta khidmadaha macaamil ganacsi ee sarrifka Binance, samee lacag bixinno gudaha dukaanka ah, iyo inbadan.
Su'aalaha soo noqnoqda ee la xiriira Cryptocurrency
Soo hel dhammaan ereyada farsamo ee Cryptocurrency iyo Blockchain.
Waa maxay Altcoin?
Altcoin waa nooc ka duwan lacagta loo yaqaan 'bitcoin'.
Blockchain waa tiknoolajiyad baahsan oo shaqeyneysa iyada oo aan lahayn awood dhexe iyada oo ay ugu mahadcelinayaan dadka isticmaala nidaamka. Waxay u oggolaaneysaa keydinta iyo faafinta macluumaadka qaab aad u xasiloon oo jaban. Xaaladda xannibaadda dadweynaha, qof kastaa wuxuu xor u yahay inuu la tashado xannibaadda oo uu hubiyo macaamilkiisa. Waxaan ku qeexi karnaa xannibaadda guud inay tahay mid guud, diiwaangelin xisaabeed aan la aqoon oo lama taabtaan ah.
Ma jiro wax war ah ilaa maanta